ajod insurance(ajod insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६१.६४ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन १८ करोड ४९ लाख...
अजोडका संचालक र उच्चपदस्थको तीनपुस्ते बोर्डमा, फोन रेकर्डका लागि सीआइबीको सहयोग मागिने
काठमाण्डौ । सेयर मूल्य बढाउने उद्देश्यले हकप्रदको सूचना चुहावटको आरोप व्यहोरेको अजोड इन्स्योरेन्सका संचालक र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण मगाएर धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान थालेको छ । अजोड इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिरिनुअघि नै बजारमा चुहिएर कम्पनीको दोश्रो बजार मूल्यमा...
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सञ्चालक निर्वाचित गरेको छ। निर्वाचित हुने सञ्चालकहरुमा पानुदत्त पौडेल र सिर्जना सुवेदी छन्। यसअघि सञ्चालक समितिले गरेको स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक विष्णुप्रसाद नेपालको नियुक्ति पनि...
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले हकप्रद जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव हाललाई स्थगन गरेको छ। बीमा समितिको निर्देशनपछि कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक बसी हाललाई हकप्रद जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव स्थगन गरेको हो। बीमा समितिले गत चैत २३ गते पत्र पठाउँदै अजोडलाई हकप्रद कम्पनीले प्रस्ताव गरेको पुँजी वृद्धि र हकप्रद जारीसम्बन्धी विशेष...
बीमा समितिद्वारा अजोड इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद रद्द गर्न निर्देशन
काठमाण्डौ । बीमा समितिले अजोड इन्स्योरेन्सको ५० प्रतिशत हकप्रद रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बीमा समितिले अजोड इन्स्योरेन्सलाई पत्र पठाउँदै हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। अजोडलाई काटिएको पत्रमा बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति रहेको र बीमा समितिलाई थाहै नदिई हकप्रदको अजोडले आफ्नो वार्षिक...
अजोडको हकप्रदसम्बन्धी सूचना चुहावटका विषयमा धितोपत्र बोर्डले थाल्यो अनुसन्धान
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रदको सूचना चुहावट भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। धितोपत्र बोर्डले अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै सेयरमूल्य वृद्धि भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र बोर्डमा प्राप्त गुनासा...
अजोडद्वारा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले इलाम बजारस्थित कम्पनीको शाखा कार्यालयमा तीनदिने कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ। आज आइतबारसम्म चलेको तालिममा कम्पनीको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका विभागीय प्रमुख दीपक पोखरेल र कामु प्रबन्धक प्रेमराज पाण्डेले प्रशिक्षण दिएका थिए। तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई इलाम...
अजोडको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ, सीआईबीमा उजुरी दिने तयारी
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्यमा हिजो सोमबार एकाएक सकारात्मक सर्किट लाग्यो। यो कम्पनीको सेयरमा खरिदचाप उच्च देखियो। त्यसो त कुनै पनि कम्पनीको सेयरमूल्यमा एकाएक उछाल आउनुको पछाडि आधिकारिक रुपमा कुनै सकारात्मक सूचना सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ। जसका कारण लगानीकर्ता आकर्षित भएको देखिनुपर्छ। तर, गत साताको अन्तिम...
अजोड इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, ५०% हकप्रद निष्कासन मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो चैत १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख ७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको डीईसीसी, अमन हलमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम...
अजोड र आइएमई मोटर्स तथा आइएमई अटोमोटिभ्स बीच नगदरहित बीमा कारोबार गर्ने सम्झौता
काठमाण्डौ। अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र आइएमई मोटर्स प्रालि तथा आइएमई अटोमोटिभ्स प्रालिबीच नगदरहित बीमा दाबीसहितको बीमा कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच आइएमई मोटर्स तथा आइएमई अटोमोटिभ्ससँग सवारीसाधनहरुको दुर्घटनाबापत बीमा दाबी प्रक्रियामा नगदरहित बीमा दाबीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन सम्झौता...
अजोड र नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघबीच बीमा सेवा सम्झौता
काठमाण्डौ। अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघबीच बीमा सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ। अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र संघका अध्यक्ष रामेश्वर पराजुलीले बुधबार एक कार्यक्रमबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौतासँगै अब संघसँग आबद्ध विभिन्न उद्योग तथा व्�...
अजोड इन्स्योरेन्सले सेयरधनीहरुलाई लाभांश नबाँड्ने
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सेयरधनीहरुलाई लाभांश नदिने भएको छ। कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै सेयरधनीहरुलाई लाभांश नदिने जानकारी गराएको हो। कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ। उक्त सूचनामा बैठकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय...
रौतहटको यमुनामाईमा अजोड इन्स्योरेन्सको घुम्ती बीमा सेवा
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्सले रौतहट जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिकामा घुम्ती बीमा सेवा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यमुनामाई गाउँपालिकाको वडा नं. ४ को वडा कार्यालयमा वडाअध्यक्ष सर्फलाल यादव र प्रशासकीय अधिकृत रामश्रेष्ठ राय यादवको प्रमुख आतिथ्यता तथा कम्पनीका नायबप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा घुम्ती बीमा...
अजोडको कारोबार किन हुन सकेन ? यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । नेप्सेमा हिजो मात्र सूचीकरण भएको अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर स्पेशल प्रिओपन समयमा कारोबार नभएकाले नियमित कारोबार समयमा सेयर कारोबार हुन सकेन । नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने गर्दछ । तदनरुप आज मंगलबारबाट अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार नेप्से तोकेको सो कम्पनीको सेयर मूल्य...